Obodo gbara osimiri okirikiri Asturia | Njem akụkọ
Mariela Carril | 26/05/2022 17:00 | Ebe njegharị, España
Asturias Ọ bụ isi obodo dị n'ụsọ oké osimiri ugwu Spain, yana akụkụ nke ókèala ya n'Oké Osimiri Cantabrian. Ihe karịrị otu nde mmadụ bi na ya, ọ bụkwa mpaghara ugwu na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Onye nwe ọtụtụ oghere okike echedoro, taa, anyị ga-elekwasị anya n'obodo nta ya, nke kachasị mma ma mara mma obodo ndị dị n'ụsọ osimiri nke Asturia.
Ọ bụ ọmarịcha obodo ịkụ azụ na-ewu ewu nke ukwuu n'oge ọkọchị tọrọ ntọala na narị afọ nke XNUMX ọ na-etolitekwa kemgbe ahụ. Ọ bụ obodo nwere akụkụ dị n'akụkụ oke osimiri dị 100 mita n'elu oke osimiri, yana ọnụ ọnụ ugwu dị n'etiti osimiri na coves. O nwekwara mpaghara nke ndagwurugwu na-eme nri na n'ikpeazụ ógbè ugwu.
Akụkụ nke ụsọ mmiri bụ Okirikiri ala echekwara na peat bog na Las Dueñas bụ ihe ncheta okike. Cudilero ọ dị naanị kilomita iri ise na isii site na Oviedo. Camino de Santiago na-agafekwa ebe a ka ọ na-aga Soto de Luiña, nke bụ nkwụsị akụkọ ihe mere eme na ụzọ ahụ.
Na Cudilero onye nwere ike gaa na ụlọ ụka, ụlọ ụka na Quinta de Selgas a ma ama, taa a ukwuu gara ngosi ihe mgbe ochie, otu mgbe nnọọ mara manor ụlọ. Ebe etiti nwere ụlọ ndị mara mma, gburugburu square nke nzọụkwụ nke amphitheater, warara okporo ámá na ọtụtụ echiche.
Mara: nke Plaza de la Marina, ọdụ ụgbọ mmiri, Mirador de la Garita, Cudilero Lighthouse na Ụzọ site na Miradors. (Mirador del Pico, Cimadevilla, the Baluarte, the Mirador del Contorno). Ije ije nke ukwuu!
Ugwu na osimiri. Oke osimiri nke obodo a dị warara n'agbanyeghị nwere ụfọdụ osimiri. Dịka ọmụmaatụ, Arra, El Portiello, La Atalaya, Santa María, Aberdil. Osimiri Guadamía bụ otu n'ime ebe mara mma, n'ọnụ ọnụ Osimiri Guadamía, onye na-eme ihe nkiri nke Asturian Costa Verde.
Ribadesella nwere ọtụtụ akụ sitere n'oge niile: enwere site na akara ukwu dinosaur na saịtị tupu akụkọ ihe mere eme elu ụlọ ochie na nke ochie dị oké ọnụ ahịa, ma obodo ma okpukpe. Ihe a niile na-adọta njem nlegharị anya ime obodo nke na-ejikwa mmemme obodo dịka carnivals na mmemme nke kalenda Ndị Kraịst.
Mara: ị ga-agarịrị Tito Bustillo Cave, Ebe Ihe Nketa Ụwa, akara ukwu nke dinosaur na Tereñes, na Obí nke Prieto-Collado, Ụlọ nke Shield, Chọọchị Santa María Magdalena, Ụlọ Elu nke Ụlọ Nche, Paseo de la Princesa Letizia., ọmarịcha njem, na Ụzọ nke Port na Beach nke Villa, okwute na Gran Vía de Agustin Argüelles.
Ọ bụrụ na ị na-amasịkwa ịga njem, akwụsịla ime okporo ụzọ osimiri, ụzọ site na ọnụ ọnụ ugwu nke Cuerres na-aga Arra osimiri.
Obodo mara mma nke dị n'ụsọ oké osimiri nke nwere okporo ámá ndị dị warara nke nwere mgbe nile, n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, na-ahụ oké osimiri ahụ. Ma ọ bụ n'ihi na e wuru ya n’elu ugwu na echiche kacha mma nke mmezi bụ mgbe ahụ site n'ọdụ ụgbọ mmiri. Akwụkwọ ozi. Nhọrọ ọzọ bụ ịbịaru nso echiche nke San Roque nke dị na elu akụkụ nke Lastres.
Na Lastres ọ dịghị ihe ọzọ nhọrọ karịa ịga ije na-eje ije n'obere okporo ụzọ ya gabiga dum obodo. Otu n'ime ndị kasị mma na Asturias na Spain. A na-akpọ osimiri ya kacha mkpa La Ideal, n'agbanyeghị na ha na-akpọkwa ya Astillero.
Akwụsịla gaa na obodo ochie, Lighthouse, Churchka Santa María de Sábada, Chapel nke San Roque ma ọ bụ Jurassic Museum. Cheta na ọ bụrụ na ị hụrụ obere obodo a na mbụ, ọ bụ na TV kemgbe Edere usoro Dọkịta Mateo ebe a n'etiti 2009 na 2011, Mpi 3.
Ọ bụ obere obodo, nke na-erughị narị mmadụ atọ bi. Ọ dị nso na Gijón, n'ọnụ ọnụ Osimiri Villavicosa, na kwa afọ ndị obodo na-echeta ọbịbịa si Falndes nke Eze Carlos V, narị afọ ise gara aga. Ọ bụ na Tazones bụ ókèala Spanish mbụ nke eze na-eto eto tinyere ụkwụ na nlọghachi ya, ya mere, kwa afọ, ihe nnọchianya dị ndụ na-ewere ọnọdụ a na-akpọ kpọmkwem Ọdịda nke Carlos V, nnukwu ememme obodo na ndị njem nlegharị anya.
Ọkwá Ọ nwere mpaghara abụọ, San Miguel na San Roque, nke e kewara n’okporo ụzọ awara awara, ekwupụtawo ha abụọ Mgbanwe nke Artistical Historical na 1991. Dị ka obodo Ribadesella, ebe a kwa ka ha chọtara akara ukwu dinosaur, site na oge Jurassic.
A haziri obere ụlọ ya, nke na-erughị ala abụọ, dị ka steepụ chere ihu n'ọdụ ụgbọ mmiri, n'oge ụfọdụ dị mkpa. ọdụ ụgbọ mmiri whaling nke na-arụ ọrụ n'etiti narị afọ nke XNUMX na XNUMX. Taa ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri na-akụ azụ na njem nlegharị anya.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Bowls? Nke Oflọ Shell N'agbata San Roque bụ ụlọ mara mma nke facade kpuchie ya na akwa mmiri dị iche iche na agba na nha. Enwekwara nke Churchka parish, na mpaghara San Miguel, bụ́ nke malitere n’afọ 1950 ma dochie nke meworo agadi nke a gbara ọkụ n’oge Agha Obodo. Ma n'ezie, akara ụkwụ dinosaur nke pụtara na nhazi Tereñes, enwere ike ịnweta ya na mmiri dị ala.
Ị na-agbada n'akụkụ osimiri na na pedrero, ihe dị ka mita 120 site na panel nke dị n'ọnụ ụzọ nke ájá ájá, ị ga-ahụ akara ukwu nke dinosaur bipedal. Ihe dị ka mita 480 n'ihu na e nwere akara ukwu ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na nke oge ochie nke na-agwa anyị banyere nnukwu anụmanụ. Ebe ọ bụ na ịnọ n'akụkụ osimiri, ezigbo echiche bụ ịga gaa na Tazones Lighthouse, nke dị n'ime obodo Villar ma na-arụ ọrụ kemgbe etiti narị afọ nke XNUMX.
Es otu n'ime ụlọ ọkụ kacha mma echekwara na oke osimiri Asturian ma ọ dị na Punta del Olivo. Ọ dị mita 127 n'ịdị elu, ogige gbara ya gburugburu na mgbidi nkume na mbadamba nkume gbara ya gburugburu. Ụlọ ọkụ ahụ nwere ala abụọ, nwere octagonal ma nwee ụlọ agbakwunyere. Nzọụkwụ ígwè 37 na-agbago na latern nke malitere na 1945 ma nwee nso nke 20 nautical miles.
Nri ime obodo bụkwa nke ama ama, dabere na azụ na azụ azụ, nke kacha mma na Cantabrian.
N'izu gara aga, anyị kwuru banyere "obodo ndị ọcha" na ebe a anyị nwere otu ma na Asturia. Ọ bụ akụkụ nke Camino de Santiago yabụ enwere ụlọ mbikọ maka ndị njem niile. Ọ na-adịbu na Middle Ages dị mkpa ọdụ ụgbọ mmiri na ụbọchị kacha adọrọ mmasị kpọmkwem site na oge a.
Ọ bụ naanị obodo dị na Asturias gbara ya gburugburu na echiche abụọ na ụlọ ụka abụọ gbara ya gburugburu, nke San Roque dị n'ebe ọdịda anyanwụ na nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke na-acha ọcha, ma nwee ọmarịcha ili. Ọzọkwa, ị nwere ike ịhụ foduru nke ebe e wusiri ike, e nwere àkwà mmiri mara mma, ụlọ ndị eze, ụlọ ndị a kpụrụ akpụ...
Ma ọ bụrụ na ị toro obodo gburugburu kwesịrị ịma nwekwara nnukwu na mara mma ubi botanical, nnukwu osimiri nwere ebili mmiri na-enweghị atụ, yana Cabo Busto, eze ifufe.
Ndị a bụ nanị obodo ise dị n'ụsọ oké osimiri na Asturia, ma e nwere ndị ọzọ. N'ezie ị nwere ike iburu ụgbọ ala, gbakwunye obodo ole na ole n'okporo ụzọ wee pụọ na-eje ije n'akụkụ osimiri ndụ ndụ. Kedu ụzọ ị na-eso? Ị nwere ike ịmalite na Llanes wee ruo Luarca na-eme njem na mkpokọta 197 kilomita: Llanes, Robadesella, Lastres, Gijón Candás, Lluanco, Avilés, Cudillero na Luarca.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Obodo Asturia dị n'ụsọ oké osimiri
Ihe ị ga-eme na Zahara de los Atunes